AMISOM oo xabsiga dhigtay Nin Turjubaan ah oo Sawirro ka qaaday iyaga oo shacab ku leynaya Muqdisho – Banaadir weyne
AMISOM oo xabsiga dhigtay Nin Turjubaan ah oo Sawirro ka qaaday iyaga oo shacab ku leynaya Muqdisho
Sarkaal Soomaali Kenyaan ah oo turjumaan u ahaa AMISOM ayey dowladda Federaalka ah ku wareejisay AMISOM kaddib markii uu sawirro ka qaaday Ciidamada AMISOM oo dad rayid ah ku leynaya Ex-Koontarool Balcad ee Muqdisho.
C/wahaab Xaaji Axmed oo ah Turjumaan ka tirsanaa AMISOM ayaa Ciidamada AMISOM oo qarax lala beegsaday kaddibna dad rayid ah leynaya sawirro ka qaaday, sawirradii ayuu ku wareejiyay Laanta dambi baarista Soomaaliya, waxaana ay isla laanta dambi baarista Sawirradii u dirtay AMISOM, si ay jawaab degdeg ah ugu bixiso.
C/wahaab oo Baydhabo ku maqnaa xilligaas ayaa waxaa u yeeray Taliska AMISOM, markii uu soo gaaray Muqdishana waxaa loo sheegay in uu xiran yahay shaqadiina laga joojiyay.
Intaas kaddib indhaha ayaa laga xiray kaddibna waxaa la geeyay Madaxtooyada Soomaaliya halkaas oo lagu jirdilay, ugu dambeyna waxaa lagu wareejiyay Ciidanka Kenya ee jooga Magaalada Kismaayo.
Isaga oo u warramay Warbaahinta gudaha ayuu sheegay in uu u adkeysan waayay dhibka ay AMISOM u geysanayeen shacabka sidaasna isu yiri hay’adaha dambi baarista la wadaag dhacdada xanuunka badan laakiin ay hay’addii uu isku halleynayay fashilisay sidaasna lagu xiray.
Ninkan waxa uu haatan ku jiraa xabsi ku yaala dalka Kenya, iyadoo Xukuumada Nairobi ay dowladda Soomaaliya ka dalbatay iney u soo gacan galisay, si xabsiyadeeda ugu Maxkamdeyso, waxaana Kiiska loo saariyay uu yahay inuu bixiyay xogta AMISOM. – Jowhar News